Portable Haihaisoft_PDF_Reader_1.4.2.0 ~ မောင်သက်ဝေ
Haihaisoft_PDF_Reader_1.4.2.0_Portable.rar (3 MB)
ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်တွေ မှာ ကိုယ် download ယူထားကြတဲ့ . pdf စာအုပ်တွေကိုအလွယ်တကူဖတ်လို့ရပါတယ်။ language ပြောင်း ရမှာပါ. အောက် ကပုံလေးအတိုင်း ဝိုင်းထားတဲ့နေရာမှာ ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြောင်းလို့ရတဲ့ ဘာသာတွေကတော့ languages: English, Arabic, Afrikaans, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian, Catalan, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Danish, Dutch, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Macedonian, Malay, Norwegian English, Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh and other languages များဖြစ်ပါတယ်၊
Windows /2000/XP/2003/Vista/7 တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. အောက်မှာေdownload ယူလိုက်ပါ...
Android Phone 1.6 နဲ့နောက်ပိုင်းထွက် များအတွက် အောက်မှာယူလိုက်ပါ...
( 1 .1 Mb )
Mac OS X 10.5.8 နဲ့ နောက်ပိုင်းထွက် များအတွက် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ...
iPhone, iPod touch, and iPad Requires iOS 4.1 နဲ့နောက်ပိုင်းထွက် များ အ တွက် အောက် မှာ ယူလိုက်ပါ...